Raad Raac News Online – Ey 6 sano dul fadhiya qabrigii ninkii lahaan jiray isaga oo ka dul ooyaya.
Ey 6 sano dul fadhiya qabrigii ninkii lahaan jiray isaga oo ka dul ooyaya.
Faarax January 11, 2013 0
Sida aynu la socono in eyda loo adeegsado waxyaabo aad u badan oo ay ka mid tahay ilaalinta guryaha , hagida dadka indhaha la ,soo saarida daroogada oo ay boolisku inta badan u adeegsadaan iyo arimo kaloo badan balse waxaa yaab leh dhacdadan aanu ka soo xiganay qaar ka mid ah warbaahinta dalka Arjantiin iadoo uu mudo lix sanadood oo ka dul barooranayay qabrigiisa ey uu iska lahaa Miguel Guzman .
Eygan ayaa waxaa la sheegay in tan iyo maalintii uu geeriyoogday ninkii lahaa usan ka dul dhaqaaqin qabriga mar uu waxyaabo yaryar soo cunayo mooyaane iyadoo marnaba aysan ka engaging ilmado labadiisa indhood ,taasoo ku khasabtay eheladii uu ka geeriyooday Miguel Guzman inay mudo markay joogaanba ay soo booqdaan eygan una keenaan cutada kuna dadaalaan nadaafadiisa madaama uu ka dhaqaaqi waayay qabriga.
Dhacdadan yabka leh ayaa waxay ku tusinaysaa in ay xayawaanka ku jiraan kuwo ka dacadsan baniaadamka qaar iysan si fudud u ilaawin cida abaalka ku leh madaama uu eygan diiday inuu kadul dhaqaaqo qabriga ninkii xanaanayn jiray iyadoo ay dad badani isku dayeen in ay ka kaxeeyaan oo ay ka mid ahaayeen eheladii ninkani.